PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - SIYABONGA NGOKULOBA NGOMFUNDISI
SIYABONGA NGOKULOBA NGOMFUNDISI
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Izindaba -
MHLELI: Ngibonga ngiyanconcoza ngokushicilela umlando kababa unicholas Bhengu webandla i-assemblies of God. Yinkonzo engazalelwa futhi ngakhulela kuyona kusukela kusunday School, sikhuliswa sifundiswa kahle ngubaba umfundisi Manzana epiet Retief, emkhondo, naye ongasekho emhlabeni.
Siyaziqhenya ngobaba bethu abatshala imbewu yokholo ezinhliziyweni zethu. Nathi siyitshalile le mbewu ezinganeni zethu ukuze zikwazi ukuhlukanisa nokwembulelwa, zazi ukuthi kulesi sikhathi samanje sokuphithizela nokuxokozela, sekukhona nabaphrofethi bamanga abaqola izimali zabantu, ngakho masiqaphele sivule amehlo. Umlando wegama lami (elithi Sindiso) uncike kakhulu emlandweni wezimvuselelo ze “Back to God” zikababa ubhengu.
Ugogo umamathebula, (ongasekho) wangilandisa ukuthi wangetha leli gama ngoba ethole insindiso ngalelo langa eminyakeni engama-50 edlule. Ugogo wasixoxela ukuthi yena nomkhulu ozala umama babengothisha futhi bephisa utshwala ngabo 1960’s.
Ngezi-12-07-1967, isalukazi sithi sashiya abaphuzayo emzini waso sanikela etendeni le e-ermelo. Uthi umfundisi ubhengu washumayela ngendlela eyisimanga, ephilisa abagulayo, wase ugogo nabanye abaningi bazinikela ensindisweni ngalo lelo langa. Uma ebuyela emzini wakhe wayengasadle nkobe zamuntu, waxo- sha amakhasimende akhe ayethenga utshwala. Abaphuzayo bamangala ukuthi sekonakalephi kule shebeen queen abayikhonze kangaka, ebashiye ekhaya kukuhle kujatshuliwe. Wabazisa ukuthi usesindisiwe yena ngakho akasafuni zidakwa notshwala emzini wakhe.
Ngaleso sikhathi ephithizela echitha utshwala kwafika i-telegramu eletha umbiko wokuthi indodakazi yakhe ibelethe umfana emkhondo. Ugogo wase ethi: “Ngithole insindiso namuhla, ngiyisidalwa esisha. Ngakho-ke igama engimetha lona umzukulu wami ngusindiso. Sindiso Bonginkosi Nkosi, Embalenhle, empumalanga Province